Sary “Photoshop”n’ilay Mpikorisa An-dranomandry Koreana Atsimo Yuna Kim Voalaza Fa Nangalarana Medaily Volamenan’i Sochi · Global Voices teny Malagasy
Sary “Photoshop”n'ilay Mpikorisa An-dranomandry Koreana Atsimo Yuna Kim Voalaza Fa Nangalarana Medaily Volamenan'i Sochi
Voadika ny 28 Febroary 2014 15:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, বাংলা, Español, English
Tamin'ny lahatsoratra hafatra, fanehoan-kevitra tsy finoana sy ompa mivantana, nipoaka ny fahatezerana teo amin'ireo mpiserasera izay tsy voafetra tamin'ny Koreana Atsimo ihany raha nandrombaka medaily volamena ilay Rosiana malaza mpikorisa an-dranomandry Adelina Sotnikova manoloana ilay mpifanandrina aminy Koreana Atsimo manana ny lazany ihany koa Yuna Kimi tamin'ny fifaninana malalaka fikorisàna an-dranomandry hoan'ny vehivavy tao Sotchi.
Vantany vao navoaka ny valiny, maro ireo nanontany ny fanolorana saro-boninahitra hoan'i Sotnikova, nilaza mihitsy aza ny manampahefana fa misy hosoka ny fifaninanana. Nanomboka nipoitra ny vaovao voalohany momba ireo andiam-mpitsara tamin'ny fifaninanana fikorisàna an-dranomandry malalaka hoan'ny vehivavy, izay nahitana mpitsara efatra avy ao Eoropa Atsinanana ( Rosia, Okraina, Estonia, Slovakia). Malaza fa vadin'ny tale jeneraly sy filohan'ny Federasion'ny Kanto Fikorisana An-dranomandry ao Rosia teo aloha ilay mpitsara Rosiana ary manana raharaha mahamenatra teo aloha kosa ilay mpitsara Okraniana izay nahazo fampiatoana herintaona noho ny fifampiraharahana fanakalozam-bato.
Ho an'ny maro tao amin'ny aterineto, toa toy ny raharaha fangalarana volamena mba hahavoa an'ilay mpanjakan'ny fikorisana an-dranomandry ankafizin'i Korea Atsimo izy ity. Nandray fepetra lavidavitra kosa ny mpiserasera sasany: fanangonan-tsonia antserasera mitaky ny fijerena indray ny naoty. Sonia 1,9 tapitrisa no voahangona tao anatin'ny roa andro latsaka. Ny sasany kosa naneho ny hatezerany am-pamazivaziana, ka mampiseho sary mamazivazy ny fianjeran'ilay mpilalao Rosiana amin'ny alalan'ny sariny natao photoshop amin'ny endrika isan-karazany.
Eritrereto fa nahita azy tamin'ny fifaninanana dihy B-boy hoan'ny lehilahy izy.
[ Fangatahana fanitsiana diso] Nahare aho fa mpandihy an'ny Exo [tarika lehilahy K-pop ] ilay vehivavy, azafady fafao ny lahatsoratra diso nosoratanao.
Maro ireo vazivazy hita mikasika izay mety ho valifaty amin'ny Lalao Olaimpika 2018, izay hampiantranoin'ny tanànan'i Koreana Atsimo ao Pyeongchang:
Maro be ihany koa ireo sioka mahatsikaiky mikasika ity voka-dalao ity. Hoy ny hafa, “Andraso mandra-pahatonga ny Lalao Olaimpika hampiantranonay ao Pyeongchang. Asehonay aminareo ilay [ mpikorisa an-dranomandry haingam-pandeha malaza ao Korea Atsimo] Lee Sang- hwa izay nahazo meday volamena tamin'ny fifaninana kanto fikorisana an-dranomandry”.Hoy kosa ny sasany nisioka, ” Fangalarana? MANANA fika Vitsivitsy izahay amin'izany. Tsy iza izany fa ny Sampam-pitsikilovam-pirenena sy ireo mpampanoa lalàna ao aminay izay hitsara ny Lalao Olaimpika ao Pyeongchang ” [ Milaza momba ny olana nateraky ny fitsabahan'ny sampam-pitsikilovana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena]
Nilaza izy ireo fa santatra ambavarano amin'ny Olaimpika ho atao ao Pyeongchang izany. [Mampiseho mpilalao fikorisana an-dranomandry nentim-paharazana ilay sary natao photoshop] tpt.tpt
Ny tena tompon-daka amin'ny lalao fikorisana an-dranomandry hoan'ny vehivavy amin'ny Lalao Olaimpika dia … izy .